HGH Miisaaniyada Thailand | U isticmaal Genotropin dufanka lumiya ee Bangkok - HGH Bangkok
HGH Miisaaniyada Thailand | U isticmaal Genotropin baruurta lumisa Bangkok
Hormoonka Koritaanka Aadanaha (somatotropin, HGH) Dadka intooda ugu badan Thailand waxay ku xiran yihiin hababka dheelitirka cayaaraha. Habka ay tahay - HGH waxay leedahay saameyn xoog leh oo ah anabolic, dhiirigelinta koritaanka murqaha, waxay xoojisaa nidaamka difaaca waxayna xitaa sababtaa saameynta wadarta guud ee dhalashada. Fursadahaas oo laga yaabo in la yareeyo dufanka jidhka ayaa badanaa lumay aragtida, laakiin maahsan - hormoonka koritaanka si uu u gubo boogo dheeraad ah oo weyn.
Tusaalaha, waxaad u weecan kartaa daraasada jaamacada Bangkok ee 1998, taasoo 24 dadka waaweyni ay qaateen qiyaasta maalinlaha ah ee 2 mg - 5 mg HGH lix bilood. Intii lagu gudajiray xilligaan jirkooda jirku hoos uma dhicin, laakiin saamiga u dhexeeya muruqyada iyo nudaha xayawaanka ayaa si weyn isu beddelay - celcelis ahaan, ka-qaybgale kastaa wuxuu helay 5.5 rodol oo muruq ah iyo, ugu muhiimsan, luminta 5.7 kg ee dufan.
Iyo dufanka ugu weyn ayaa lagu xusay caloosha. La yaab ma leh markii ugu dambeysay ee ay ahayd dawooyin sida Genotropin, jintropin iyo ansomone iyo daroogooyin kale oo koritaanka hoormoonka ah ee loo doorto ciyaartooy badan oo doonaya inay yareeyaan boqolkiiba baruurta jirka.
Sidee H loogu talagalay miisaanka oo yaraada?
Qeyb weyn oo ka mid ah guryaha dufanka gubta ee HGH waxay la xiriirtaa saameynteeda dheef-shiid kiimikaadka. Cudurka dheef-shiid kiimikaad, Waxaa la ogyahay in ku dhawaad ​​unug kasta oo ka mid ah jirka bini aadamka ay ku yaalliin asiidh dufan ama glucose. Haddiise xaddiga gulukoosta dhiiggu ay xukumaan hormoonka anabolic Insulin, xaddiga asiidha dufanka ee hoormoonka korniinka.
Hadafka aad rabto inaad gaarto miisaanka oo yaraada iyo yareynta dufanka, waa inaad ku qasabto unugyada inay cunaan dufanka badan sonkorta. Insulin jawaabtu maahan - waxay ku haysaa heerka gulukooska heer caadi ah waxayna ku kaydisaa marinno. Si kasta ha noqotee, waxay u keentaa unugyada inay cunaan gulukooska, ma aha baruurta, isku mar waxay kordhiyaan sameynta aashitada dufanka ee beerka.
Laakiin HGH oo ah nooc ka soo horjeedka insulin - ta, waxay isku dayeysaa inay yareyso isticmaalka gulukooska unugyada ayna ku qasabto inay cunaan dufanka dufanka badan. Si tan loo sameeyo, waxay isku dheelitirtaa xuubka unugyada baruurta waxayna u adeegtaa sidii nidaamka gaadiid ee iyaga uga qaada acids dufan, keenaya dhiig, waxayna siisaa oksijiin. Si kale haddii loo dhigo, waxay u weecataa habka lipolysis, taas oo yareyneysa tirada unugyada baruurta.
Tan ugu muhiimsanna, unugyada baruurta HGH kaliya kama quusan doonaan waxyaabaha ku jira oo lama burburin doono. Laakiin haddii unugyada jirka ay u baahan doonaan acids dufan badan, iyo burburka unugyada dufanka ah ee hoos yimaada ficil hoormoonka koritaanka, iyo abaabulidda dufanka kaydka ayaa kordhaya, taas oo horseedi doonta miisaan lumis.
Haddii aad runtii rabto inaad soo koobeyso, jirka wuxuu kaliya bilaabayaa inuu cuno dufanka u gaarka ah. Tanna, tan ugu horreysa, waxaad u baahan tahay xaddi ku filan hormoonka korniinka.
Heerka hormoonka koritaanka ee miisaanka luminta ee Bangkok
Waxaa jira dhawr nooc oo hoormoon koraya. Mid kasta oo ka mid ah ayaa ujeedadoodu tahay ujeedooyin kala duwan, waxaana ugu fiican ka hor intaan la soo bandhigin midkood inay la tashadaan takhtar ku yaalla Thailand. Ama, ugu yaraan, si loo hubiyo in miisaanka lumo wax dhibaato ah kuma jiraan hoormoonka tayroodhka iyo hormoonnada jinsiga, haddii kale saameynta la filayo ee HGH kaliya ma muujineyso.
Qaybta caadiga ah ee HGH ee miisaanka luminta iyo helitaanka riixista muruqu waxay ka bilaabmaysaa irbado subag leh oo ah unugyada 2 maalin kasta. Haddii aysan soo bandhigin waxyeellooyinka (hoos), kadib toddobaadkii labaad waxaad kordhin kartaa qiyaasta unugyada 5, hase yeeshee muddo dheer oo joogitaanka jirka ee qiyaasta hormoonada hormoonada koritaanka waxay keeni doontaa xaqiiqda ah in beedka iskuday in aad isku dheelitirto inta qadarka ah oo dhan ee insulinta ayaa shaqeyneysa.
Fiiro gaar ah: Mararka qaarkood xitaa waxaa lagula talinayaa in ay ku caawiyaan beeryaraha taas oo lagu sameynayo irbado dheeraad ah oo insulin ah. Laakiin waxaa muhiim ah hababka isticmaalka hoormoonka koritaanka ee qiyaasta sare, in ka badan hal cutub oo 5 maalintii.
Si loo xoojiyo hormoonka koritaanka marka jirku uu abuurayo xaaladaha ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, sida sonkorta dhiigga oo hoos u dhacda. Waqtiga cuntada ka hor (wakhtiga wanaagsan ee calool madhan subaxda) iyo inta lagu jiro ama ka dib marka jimicsiga xooggan, marka sonkortu uu ku dhaco dhaqdhaqaaqa jireed. Waxaa lagu taliyey in la iska duro subcutaneous, inkastoo ay jiraan faalo wanaagsan oo ku saabsan hordhaca HGH intramuscularly. Caadi ahaan cirridka caloosha, taas oo ka caawisa dhibicda dufanka gobolka.
Muddada koorsada si kor loogu qaado saameynta HGH waxay u baahan tahay inay gasho nidaamka tababarka isboortiska, ugu horreyntii awooda, 2-3 jeer toddobaadkii. Tababbarro xoogaa ah ayaa loo baahan yahay in la qasi karo aerobic. Si aad u caawiso hormoonka koritaanka hormoonka jidhka waxa uu ku jiraa dheef-shiid kiimikaadka, waxaad ku geli kartaa cunto karboheydeed oo jilicsan. Guud ahaan, inkasta oo ay jirto talo soo jeedin ah in lagu dhajiyo cunto celcelis kalooriye ah (ie cunid iyo kharaj ku saabsan qiyaasta kalooraha), xitaa wareegga korantada ee qiyaasta tamarta qaaliga ah waxay keeni kartaa saamaynta gubitaanka dufanka la rabo.
Inta lagu gudajiro koorsada ugu wanaagsan ee miisaanka lumisa waxaa lagula talinayaa in la cabbo iyo miisaanka kale oo lumi - hoormoonka korniinka badanaa kuma murmo midkoodna. Gaar ahaan si wanaagsan hoormoonka tayroodh, sida thyroxine (100-150 µg maalin kasta) ama triiodothyronine (25 µg maalin kasta).
Kaliya maahan inay iyagu iskood wax u cunaan, laakiin sidoo kale waxay waxtar u leeyihiin qanjirka tayroodh. Inta lagu gudajiro hoormoonka koritaanka waxay ubaahantahay - HGH waxay horjoogsanaysaa shaqadeeda waxayna xitaa u horseedi kartaa kororkeeda, sidaa darteed hoormoonka tayroodh muddadan waxay gacan ka geysan doontaa yareynta muujinta waxyeelada suurtogalka ah.
ECA iyo astaamaha clogbuterol ee hormoonka koritaanka hormoonka kor u kaca ayaa sidoo kale xoojiya saameynta gubitaanka duurjoogta, inkastoo, si kastaba ha ahaatee, waxay kordhiyaan halista saameyntooda.
Dhibaatooyinka kale ee HGH
Xaqiiqdii, HGH waxay dabiici u tahay jidhka bini’aadamka. Tusaale ahaan, da 'ahaan, mugga "u gaar ah" ee bina aadamka waa la yareeyay, sidaa darteed soo celinta helitaanka HGH ee dibedda waxay umuuqataa ifafaale aan dhib lahayn, intaas kasii badan marka aan la xakamayn karin hoormoonka jirka.
Tani waa waxyeelooyinka ugu yar ee HGH. Badanaa waxaa lala barbar dhigaa steroids-ka (saameyntu waa lamid tahay, waxayna u adeegsaneysaa wax ku saabsan kooxo isku mid ah shaqsiyaadka), laakiin ma saameynayso soo-saarka hoormoonka galmada, waxaana sabab u ah farsamooyin kala duwan oo ficil ah oo leh cawaaqib xumo. Sidoo kale kadib koorso hormoon koritaan looma baahna daaweynta dabad-wareega, waxay sidoo kale ka hadlaysaa nabadgelyadiisa.
Thailand gudaheeda waxaa jira khuraafaad ah in isticmaalka hormoonka korniinka ee miisaanka oo yaraada ay keenayso kordhinta dhegaha, sanka, dhabannada, carabka, carjawda, lafaha (oo leh muuqaalka nabarrada foosha xun ee goobaha kala-goysyada), wadnaha. iyo xubno kale oo gudaha ah (tusaale ahaan la siiyay "kuwa jirka dhisa ee uurka leh") waa ciyaartooy xirfadlayaal ah oo jirkooda koray hadana hada dabeecad ahaan caloosha ku jira).
Waxaas oo dhami runtii way dhici karaan, laakiin waa markii aad si xun u isticmaasho daroogada oo aad u badan xaddi xad dhaaf ah oo lagula taliyo. Isticmaalka caadiga ah ee HGH si miisaan lumis la mid ah oo aan la mid ahayn.
Saameynta ugu badan ee dhabta ah ee HGH - tunpal syndrome, taas oo lagu sifeeyo kabuubyada addimada. Laakinse waxaa loola jeedaa xanuujinta qulqulka muruqyada oo kor u kaca, sidaa daraadeed heerka miisaanka lumitaanka ayaa halis u ah cilladda cudurka.
Saameynta xun ee beeryarada iyo qanjirka thyroid, sida kor ku xusan. Daawada dhakhtar qoro - insulin iyo hormoonka thyroid, siday u kala horreeyaan. Kadib joojinta hawlgalka hormoonka koritaanka, qanjidhada ayaa soo kabanaya.
Waxyeellada soo raaca waa cadaadis kordhin, taasoo ka hortagi karta ama yareyn karta qiyaasaha HGH, ama daawooyinka hoos u dhiga cadaadiska dhiigga.
Halkee laga iibsadaa hoormoonka koritaanka ee Thailand?
Iibso hormoonka kobaca ayaa ah malaha ugu muhiimsan ee koorsadiisa. Xaqiiqdu waxay tahay in badi dieteriyadu ay iibsadaan HGH oo ka iibsanaya dukaamada "gacan leh" ama iyada oo loo marayo website-yo su'aal ah. Laakiin 75% daawada Thailand ayaa been abuurtay. Xitaa xitaa saaxiibada nolosha dhabta ah waxay iibsadeen sababtoo ah xaqiiqda ah in kuwa si qalad ah loo kaydiyey - HGH waa inay ku haysaa qaboojiyaha, waxay kordhisaa nolosheeda shelf.
Hal gebo waa in la gato hormoonka koritaanka kaliya ee ku jira Farmasiga. Waa daroogo la mamnuucay, lakiin kaliya waa isboorti (doping). Soo iibso hoormoonka koritaanka miisaanka lumitaanka aad si sharci ah uga heli karto magaalada Bangkok. Daawooyinka la aqoonsan yahay HGH waa "Genotropin","Ansomone"Iyo" Jintropin "oo dhan, iyo" afarta sare ee ugu caansan "," buluka "iyo" Norditropin "waa 100% been abuur ah iyo xitaa markaad iibsaneyso farmashiyaha shahaadada leh waa inaadan ilaawin inaad iska hubiso warqadda ilaalinta ee baakadka Kuwaas oo ay ku xiran yihiin soo saarayaasha si looga hortago been-abuurka.
Loo soo diray: HGH miisaan lumis
article Previous Waqtiga duritaanka HGH, talooyinka qiyaasta daawada Genotropin IU
Next article HGH loogu talagalay Haweenka - Daaweynta anti-gabowga ee Thailand